Ozette Ostrow, Qoraa Xarunta EcoTechnology
Illaa iyo hadda Ozette Ostrow wuxuu abuuray 14 gelitaan qoraal.
Maalin kasta waxaad qaadataa go'aanno saameeya cimilada. Mararka qaarkood, waxa saxda ah in la sameeyo had iyo jeer ma aha kuwa ugu cad cad - joogtayntu waxay noqon kartaa mid ka hor tag badan inta aad moodeyso. Waxaan taxaynaa qaar ka mid ah fikradaha khaldan ee caamka ah iyo waxa laga yeelayo. 1. Haa, runti - isticmaal weelka weelka lagu dhaqo! Maydhayaasha dharka ayaa noqday